Yangon-Bangkok- Pattaya April Water Festival - Tripme
ရန်ကုန်-ဘန်ကောက်-ပတ္တရား April သင်္ကြန် အထူးအစီအစဉ် (တစ်ဦးလျှင် $ 560 )
Yangon – Bangkok – Pattaya Tour Package
13 -16 April 2020, (3 Nights /4Days)
(တစ်ဦးလျှင် $ 560 )
Day 1️ : : Yangon – Bangkok – Pattaya (L/D)
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် Tour Leader မှစောင့်ကြိုနေမည်ဖြစ်ပြီး မနက်လေယာဉ်ဖြင့် ဘန်ကောက်မြို့ Don Mueang လေဆိပ်သို့ စတင်ထွက်ခွါမည်ဖြစ်ပါသည်။ Don Mueang လေဆိပ်တွင် ဧည့်လမ်းညွှန်မှ စောင့်ကြိုနေမှာ ဖြစ်ပြီး ထို့နောက် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အနားယူအပန်းဖြေရာ ကမ်းခြေ မြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်သော ပတ္တရားမြို့သို့ စတင်ထွက်ခွါပါမည်။ လေဆိပ်မှ ပတ္တရားမြို့သို့ (3 or 4hrs) ကားမောင်းချိန် ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး ပတ္တရားမြို့သို့ ရောက်ရှိသောအခါ နေ့လည်စာကို ဒေသစားသောက်ဆိုင် တွင် ဧည့်ခံမည် ဖြစ်ပါသည်။ လမ်းတွင် ကျောက်တောင်၌ ထွင်းထားသော လေဆာဘုရားနှင့် ဓါတ်ပုံရိုက်ရန် အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သော Silver Lake စပျစ်ခြံသို့ လည်ပတ်ပါမည်။ ညနေပိုင်းတွင် အရှေ့တောင်အာရှ၏ အလှပဆုံးဥယျာဉ်တစ်ခုဖြစ်သော Noong Nooch ဥယျာဉ်အတွင်း ဓါတ်ဖမ်းနိုင်ပါမည်။ ထို့နောက် ဒေသခံစားသောက်ဆိုင် တွင် ညစာ သုံးဆောင်ကြပြီးနောက် Alcaza Show ပွဲ သို့သွားရောက်ကြည့်ရှုကြပါမည်။ ထို့နောက် မိမိတို့တည်းခိုရာ ဟိုတယ်တွင် ပြန်လည် အိပ်စက် အနားယူပါမည်။
Day 2️ : : Pattaya – Bangkok (B/L/D)
ဟိုတယ်တွင် မနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် Coral Island သို့ Speed Boat ဖြင့် သွားရောက်လည်ပတ်ပြီး နေ့လည်စာကို A One Cruise hotel တွင် International Buffet ဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံပါမည်။ ထို့နောက် ဘန်ကောက်သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွါလာပြီး ညနေပိုင်းတွင် ဧညိ့သည်တော်များ စိတ်ကြိုက်ဈေးဝယ်နိုင်မည့် MBK Shopping Centre သို့ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ညစာကို ရိုးရာအစားအသောက်များ သုံးဆောင်ပြီး ဟိုတယ်တွင်ညအိပ် တည်းခိုမည်ဖြစ်ပါသည်။
Day 3️ : : Bangkok Sightseeing – Safari World(B/L/D)
မနက်စာကို ဟိုတယ်တွင်သုံးဆောင်ပါမည်။ ထို့နောက် Safari World သို့သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ Marine Park တွင်လည်း Dolphin Show ကြည့်ရှုခံစားပြီးနောက် နေ့လည်စာသုံးဆောင်ကြပါမည်။ ထို့နောက် ညနေပိုင်းတွင် ကျောက်ဖရားမြစ်၏ အလှအပကို ကြည့်ရှုခံစားရင်း အပန်းဖြေအနားယူနိုင်မည့် Asiatique: The Riverfront Mall သို့ သွားရောက်ပါမည်။ Asiatique: Riverfront View သည် ဘန်ကောက်မြို့သို့ ရောက်လျှင် မသွားမဖြစ် သွားသင့်သော နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ညနေခင်းဈေးတန်းများတွင် အစားအသောက်များနှင့် လက်ဆောင်များဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ညစာကို Asia hotel တွင် International Buffet ဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံပြီး ဟိုတယ်၌ အိပ်စက် အနားယူပါမည်။
Day 4️ : : Bangkok Departure (B/L)
ဟိုတယ်တွင် မနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အလေးအမြတ်ထားရာ မြဘုရား (Emerald Buddha) နှင့် ဘုရင့်နန်းတော်တော် တို့သို့ သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါမည်။ နေ့လည်စာကို Centara Watergate Hotel တွင် International Buffet ဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံပါမည်။ ထို့နောက် Don Mueang လေဆိပ်သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွါပြီး ရန်ကုန်မြို့တော်သို့ ညနေပိုင်းလေယာဉ်ဖြင့် ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ü အသွားအပြန်လေယာဉ်လက်မှတ် (Nok Air 20kg ပါဝင်ပြီး)
ü ကြယ် ၃ ပွင့်အဆင့်ရှိ ဟိုတယ်တွင် ၃ ညတာတည်းခိုခွင့် (နံနက်စာ ပါဝင်ပြီး)
ü ခရီးစဉ်အတွင်း သီးသန့် အဲယားကွန်းကား ၀န်ဆောင်မှု
ü ဒေသခံအင်္ဂလိပ်စကားပြောဧည့်လမ်းညွှန် နှင့် မြန်မာအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
ü ခရီးစဉ်အတွင်း ဖော်ပြထားသော အစားအသောက်များ (မနက်စာ/နေ့လည်စာ/ညစာ)
• ကိုယ်ပိုင်အသုံးစရိတ်များ (အ၀တ်လျှော်ခ၊ တယ်လီဖုန်းပြောဆိုခ၊ ဈေးဝယ် အစရှိသည်…….)
Tripmee Travel & Tours မှ ၀န်ဆောင်မှုများကို ၀ယ်ယူအားပေးခြင်းအား အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
13 -16 April 2020,
13 -16 April 2020
Created with Sketch. from $414,00